သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> သားရေအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို -> အပ်ချုပ်, သားရေ
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan အပ်ချုပ်, သားရေ ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ: DDX1，DDX2 S ，DDX2 LR
Size: 21/30 ~ 27/250
Equivalent Systems: 328; 214X1, SY4950
machine: ဖိနပ်-broder Threading စက်
ဒါဟာနှစ်ဆသောဆေးထိုးအပ် moccasin စက်, InterlockProtocol ကို machine.Standard ပတ်ပတ်လည်ပွိုင့်အဘို့ဖြစ်၏။ အထည်ပွိုင့် - effect ကိုဖြတ်တောက်မရှိ။ လုနီးပါးဖြောင့်
သေးမမှန်ခြင်းနှင့် variable ကိုချုပ်အသွင်အပြင်။ စက်ချုပ်အပ်ချည်အနည်းငယ်မြင့်သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိချုပ်တွင်း။ ရှည်လျားချုပ်ရန်အလတ်စားမှကိုက်ညီ။ ဒါဟာအပ်ချုပ်ရှူးဖိနပ်, လက်ကိုင်အိတ်, lusterware နှင့်ပျော့ပျောင်းသောသားရေများအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 328; 214X1, SY4950 ။
DDX2 S က
Point: S က
size: 21/130 ~ 27/250
Equivalent Systems: 214X2NCROSS, 328 S က, 328 SS
အဆိုပါဝိသေသ: လက်ဝါးကပ်တိုင်ပွိုင့် "S" နဲ့အပ်ကို။ sewing.The groove ၏ဦးတည်ချက်ကိုအတွက်သားရေဖြတ်လက်ဝဲဘက်ခြမ်းမှာရန်ဖြစ်သည်နှင့်ဖိနပ်နယ်စပ် Threading စက်ပေါ်တွင် အသုံးပြု. စံ scarf.It ရှိပါတယ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 214X2NCROSS, 328 S က, 328 SS ။
Equivalent Systems: 328LR, 214X2 RTW, 214X2 NRTW
လက်ဝါးကပ်တိုင်ပွိုင့် "S" နဲ့ဆေးထိုးအပ်။ ဒါဟာနှစ်ဆသောဆေးထိုးအပ် moccasin စက်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ အပ်ချုပ်ပညာရဲ့လမ်းညွှန်မှုမှာ 45 °ထောင့်ချိုးမှာညာဘက်ရန်သားရေဖြတ်ယူပါ။ အပ်ချုပ်ပညာကိုခြေနင်း, လက်ကိုင်အိတ်, သားရေ wares.Equivalent စနစ်များထည့်သွင်းထိုသို့သင့်လျော်မယ့်: 328LR, 214X2 RTW, NRTW 214X2 ။